ट्राफिक व्यवस्थापनलाई स्मार्ट बनाउँदै ‘यार्सा टेक्नोलोजी’
बिहीबार, ५ जेठ, २०७९
कमल केसी बिहीबार, २२ बैशाख, २०७९
काठमाडौंको सडकमा देखिने अव्यवस्थित ट्राफिक, यहाँको मूख्य समस्या हो । शहरलाई विरुप बनाएको यहाँको ट्राफिक जामका कारण समस्यामा नपर्ने सायदै कोही होलान् ।
विभिन्न समयमा सरकारी तहबाट ट्राफिक जामलाई व्यस्थित पार्न प्रयासहरुको पनि थालनी भएका छन् । तर ती पूर्ण हुन सकेनन् ।
सिंगो प्रणालीले व्यवस्थित गर्न नसकेको ट्राफिक जाम समस्यालाई अहिले दुई नेपाली युवा समाधान गर्न कम्मर कसेर लागि परेका छन् । यी दुई युवा हुन् नवलपरासीका सिद्धिक अन्सारी र सिन्धुलीका राम चन्द्र खड्का ।
सन् २०१६ तिर काठमाडौं छिरेका यी दुई युवाले काठमाडौंका गल्ली तथा सडकहरुमा आखाँले हेर्न नभ्याउने गरी सडकमा ट्राफिक जाम देखे । यस्तो विकराल समस्यालाई त तत्काल समाधान गर्नैपर्छ भन्ने ठानेर त्यसपछि यी दुई युवाले स्मार्ट ट्राफिक लाइटको रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा जुटे ।
दिनरात त्यसैको अध्ययनमा जुटेपछि सोही वर्ष यी तन्नेरीहरुले स्मार्ट ट्राफिक लाइटको प्रोटोटाइप अर्थात नमुना पनि तयार पार्न सफल भए ।
यसरी तयार पारेको लाइटलाई बेच्न दुबैले सन् २०१७ मा यार्सा टेक्नोलोजीको नामका कम्पनी समेत दर्ता गराए । सिद्दिक अन्सारी कम्पनीको संस्थापक सीईओको भूमिकामा रहे ।
सौभाग्य भनौं वा संयोग सोही वर्ष ट्राफिक महाशाखा प्रमुखका रुपमा सर्वेन्द्र खनाल आए । ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ भन्ने खनालको सोच थियो । यता यार्सा पनि प्रोडक्टलाई बजारमा ब्रेकथ्रु लैजान बाटो खोजिरहेको थियो । यसैबीच सर्वेन्द्र खनाल र उनको भिजनबारे यार्साले थाहा पायो ।
अनि त्यसपछि त ट्राफिक महाशाखाको समन्वयमा यार्सा टरक्नोलोजी र भौतिक यातायात मन्त्रालयबीच छलफल सुरु भईहाल्यो । छलफल सकरात्मक रह्यो । मन्त्रालयले नयाँ वानेश्वर र नारायण गोपाल चोकमा ट्राफिक लाइटको पाइलट टेस्टिङ सुरू गर्न यार्सालाई निर्देशन दियो ।
पाइलट टेस्टिङ सफल भयो ।
‘त्यसैबेला देखि हामीले मन्त्रालय र हामीबीच सहकार्य सुरु भयो,’ अन्सारीले आईसीसी समाचारसँग भने, ‘अनि सडक र चोकहरुमा हामीले ट्राफिक लाईट इन्स्लेसन गर्न सुरु गर्यौं ।’
हालसम्म यार्सा टेक्नोलोजीले ५१ ठाउँमा ट्राफिक लाइट जडान गरेको छ भने अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्ने तयारी छ । अहिले जडान भएका अधिकांश ट्राफिक लाइट काठमाडौं उपत्यकामा छन् । सडक विभाग, स्थानीय तह र बैंक लगायत निकायहरुले ती ट्राफिक लाइट राखेका छन् ।
कस्तो छ त यार्साको स्मार्ट लाईट ?
नेपालमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट राख्ने यार्सा टेक्नोलोजी पहिलो कम्पनी होइन । त्यसभन्दा अगाडि कतिपय ठाउँमा जाइकाले पनि ट्राफिक लाइट राखेको थियो तर ती चल्न सकेनन् ।
यार्सा टेक्नोलोजीले यहीँ समस्यालाई चिर्न आफूले लाईटमा प्रोडक्टसँगै मेन्टेनेन्सको सुविधा पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।
कम्पनी बनाएको ट्राफिक लाईटले ब्याट्रीको खपत एकदमै कम गर्छ । पहिले लोडसेडिङ हुँदा सोलारबाट पनि सञ्चालन हुन्थ्यो भने अहिले बिजुलीबाट सञ्चालन हुन्छ । यसले एक दिनमा १.५ देखि २ युनिटसम्म विद्युत खपत गर्छ । ट्राफिक लाइट ब्याट्रीमा ब्याकअप सिस्टम पनि राखिएको छ, जसले २–३ घण्टासम्म धान्छ ।
यसको मूल्य सडकहरु अनुसार फरक पर्छ । जुन १८–१९ लाखसम्म पर्दछ ।
‘कुन बोटो र कस्तो खालको बाटोमा ट्राफिक लाईटको राख्ने ? शुल्क त्यसमा भर पर्छ’ अन्सारी भन्छन् ।
यार्साले स्मार्ट ट्राफिक लाइटको डिजाइन र डेभलपमेन्ट नेपालमै गरेपनि त्यसका लागि आवश्यक सामग्री विदेशबाट ल्याउने गरेको छ ।
तर यार्साका लागि एउटा नीतिगत चुनौती पनि रहेको छ । नेपाल सरकारसँग अहिलेसम्म स्मार्ट ट्राफिक लाइट निर्माणका लागि निश्चित मापदण्ड छैन । बन्ने तयारी भईरहेको छ । तर काम त गर्नैपर्छ यसैले अहिले यार्सा टेक्नोलोजी अमेरिकी मापदण्ड अनुसार ट्राफिक लाइट बनाउँदै आईरहेको छ ।
‘नेपाल सरकारले पनि चाढै मापदण्ड ल्याउला त्यसपछि सोही अनुसार हामी लाईट बनाउने छौं ।’ अन्सारी आशाको स्वरमा भन्छन् ।
हल ट्राफिक लाईट बाहेक यार्सा टेक्नोलोजी सिंगो सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि काम गर्न अग्रसर छ । यसका लागि यार्साले सडक सुरक्षाका विभिन्न विषय अनुसन्धान र प्रोडक्ट विकास गर्दै आईरहेको छ ।
‘हामीले यसअघि करिब ७–८ महिना अघि स्मार्ट स्ट्रिट लाइट पनि तयार गरेका थियौं । उक्त स्ट्रिट लाइटको ललितपुरमा सफल परीक्षण पनि भइसकेको छ ।’ अन्सारी सुनाउँछन् ।
उक्त स्मार्ट स्ट्रिट लाइटमा मान्छेको आवतजावत अनुसार लाइटको ब्राइटनेस म्यानुअलरुपमा घटाउन बढाउन सकिन्छ । स्मार्ट स्ट्रिट लाइटबाट कुन लाइट बलेको छ, कुन लाइटमा समस्या आएको छ त्यो थाहा पाउन सकिन्छ ।
‘अहिले हामीले कन्ट्रोलर दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘उक्त कन्ट्रोलरको प्रयोग गरेर पूराना स्ट्रिट लाइटलाई स्मार्ट बनाउन सकिन्छ ।’
त्यस्तै यार्सा टेक्नोलोजीले भेहिलक काउन्टिङ र रेड लाइट भ्वाइलेसन सिस्टमको विकासमा समेत काम गरिरहेका छन् । भेहिकल काउन्टिङबाट कुन सडकमा कति सवारीसाधन कुदिरहेको छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ ।
साथै रेड लाइट भ्वाइलेसन सिस्टमबाट कुन सवारीसाधनले रेड लाइट भ्वाइलेसन ग¥यो त्यसको जानकारी प्रहरीलाई जान्छ ।
सडक विभागले बाटो बनाउन मात्र रूची देखाएको र सडक सुरक्षामा कम रूची देखाएकोमा उनको गुनासो छ । सेफ्टि बिलिन्कर र जेब्राक्रसिङमा पनि ट्राफिक लाइट राख्नु पर्ने उनी बताउँछन् ।
तर विभागको चेत यतातिर पनि विस्तारै बढ्दै जानेमा उनी आशावादी छ ।
कम्पनीमा २ संस्थापकसहित ८ जना कार्यरत रहेका छन् ।
अर्बन बगैँचाः अब आईओटीमार्फत अटोमेट हुन्छ हावामा हुने खेती
सोमबार, २६ बैशाख, २०७९
दिदीबहिनीले सुरू गरेको ‘बिहे नेपाल’, जसले खोजिदिन्छ तपाईलाई सुहाउँदो जीवनसाथी
मंगलबार, १३ बैशाख, २०७९
स्टार्टअप तथा आइडिया फेस्टः यस्ता छन् प्रदेश एकबाट चयन भएका ७ स्टार्टअप र आईडिया
बिहीबार, ८ बैशाख, २०७९
स्टार्टअप नीति आवश्यक छः अध्यक्ष गोल्छा
एक नम्बर प्रदेशमा सम्पन्न भयो स्टार्टअप एण्ड आईडिया फेस्ट, ३० बढी स्टार्टअपको सहभागीता
सोमबार, ५ बैशाख, २०७९
स्टार्टअप एण्ड आइडिया फेस्टः यस्ता छन् गण्डकी प्रदेशका उत्कृष्ट स्टार्टअप
शुक्रबार, २ बैशाख, २०७९
विद्युतीय चेक क्लियरिङ्ग प्रणाली र अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणाली कारोबारको समय सीमा फेरबदल
कसले कहाँ कहाँ जिते ? मोबाइलमै यसरी हेर्नुहोस् स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम
सिंगललाई जीवनसाथी खोजिदिने एप ‘बिहे नेपाल’ (भिडिओ)
भीपीएन के हो र कसरी काम गर्छ ? किन प्रयोग गर्ने भीपीएन ?
यसरी बनाउनुहोस् यूएसबी ड्राइभलाई बुटेबल
REPORT: Nokia G20 receives Android 12 update with May 2022 Security Patch
Tesla to host Artificial Intelligence Day on August 19, recruits new talent
Fusemachines inaugurates new office in Kathmandu, US Ambassador to Nepal Randy Berry and other dignitaries attended the inauguration
Huawei Digital Nepal Conclave to take place in the first week of Ashadh, includes agenda and concepts of Digital Nepal in detail
Google Pixel 6a with Tensor SoC launched: Specifications and Pricing in Nepal?
फोन : +977-9801263601, 9801263603
Copyright © 2022. ICTech News